ILIFE A11, safidy misy endri-javatra maro sy vidiny tsara [Famerenana] | Vaovao Gadget
Miguel Hernandez | 25/03/2022 22:38 | Nohavaozina amin'ny 25/03/2022 22:40 | General, hevitra
I LIFE manana fianakaviana mpanadio banga robot sy karazana fitaovana hafa natao hanampiana antsika amin'ny raharahan-tokantranontsika izay, noho ny famokarana tsara sy ny fahombiazany, dia lasa fenitra indostrialy, fanondroana tsara rehefa mitady ny fifandraisana misy eo amin'ny kalitao sy ny kalitao ianao. vidiny.
Ahoana no mety ho raha tsy izany, Ahoana no mety ho raha tsy izany, dia mitondra anao fanadihadiana lalina momba ny ILIFE A11 vaovao, robot mpanadio banga manana endri-javatra avo lenta sy ny vidiny antonony. Fantaro miaraka aminay ny toetran'ity ILIFE A11 ity ary nahoana izy io no apetraka ho safidy tena mahaliana eo amin'ny tsena.
1 Famolavolana sy fitaovana: Amin'ny haavon'ny premium
3 Fomba fanadiovana sy rafitra 2-in-1
Famolavolana sy fitaovana: Amin'ny haavon'ny premium
Raha ny momba ny famolavolana, ILIFE dia nanapa-kevitra ny hanohy ny fikojakojana ny endrika famolavolana azy, izay iraisan'ny ankamaroan'ny fitaovana amin'ity karazana ity. Amin'ity tranga ity dia miatrika fitaovana iray isika 350 x 350 x 94,5 milimetatra amin'ny lanjany mihoatra ny 3,5 kilao, ao anatin'ny fenitry ny indostria.
Ho an'ny tapany ambany dia misy kodiarana roa misy cushioning, kodiarana multidirectional eo anoloana ary roller silicone mifangaro sy borosy nylon mba hanomezana fanadiovana tanteraka amin'ny karazana surface rehetra. Ampahany aoriana ho an'ny rafitra fampifandraisana mop sy borosy iray mihodina eo amin'ny faritra ambony havia. Mihoatra noho ny ampy.
Liana hividy ny ILIFE A11 ve ianao? azonao atao izao mahazo ny vidiny tsara indrindra avy eto
Eo an-tampony dia manana sensor LiDAR mibaiko ny fitaovana isika, bokotra roa ON/OFF ary miverina any amin'ny toby fiampangana ary tafo mainty piano izay hahafaly ny mpankafy vovoka sy dian-tanana. Tsy misy eccentricity ankoatra ny rafitra fiampangana azy manokana.
Atsinanana, lavitra ny fisian'ny tsimatra eo am-pototry ny fitaovana fa eo anoloana no misy azy miaraka amin'ny faritra metaly roa elongated izay mifanandrify amin'ny mitovy aminy ao amin'ny toby fiampangana, mifandray amin'ny herinaratra. Tsy fantatro ny fiantraikan'izany amin'ny haavon'ny risika elektrika, raha ny marina, aleoko ny tsipika mahazatra hita eo am-pototry ny fitaovana.
Ity ILIFE A11 ity dia manana mari-pankasitrahana ROHS ary koa hery setroka ambony indrindra hatramin'ny 4.000 Pa arakaraka ny fomba fanadiovana izay nofidiantsika. Mba hanaovana izany, dia misy bateria 5.200 mAh izay manome fanadiovana mandritra ny 180 minitra eo ho eo. miaraka amin'ny fomba suction ekonomika indrindra. Tsy afaka nanamarina izany tafahoatra izany izahay satria ny haben'ny trano ampiasaina amin'ny famerenana dia kely lavitra noho ny fahaiza-manadio ny ILIFE A11, izany hoe tsy nahavita nandatsaka mihoatra ny 50% ny bateria.
Manana rafitra fanaovana sari-tany maromaro izahay
Misy teknolojia LiDAR 2.0 izay manao sari-tany tena mahaliana sy haingana, mihamitombo Santionany 3.000 isa-tsegondra ho an'ny elanelana ambony indrindra 8 metatra. Ny algorithm CV-Slam dia naneho vokatra tsara tamin'ny famakafakana natao, fametahana ny sakana toy ny fandriana, sofa ary latabatra tsara. Amin'ny fanadiovana faharoa, dia manatsara ny fahombiazany izy io ary manafaingana ny fomba fiasa amin'ny fomba marim-pototra, zavatra tena ankasitrahana amin'ny gorodona iray, izay tsy azo avela amin'ny fitaovany manokana ny fitaovana.
Fomba fanadiovana sy rafitra 2-in-1
Asongadinay ny zava-misy fa ny ILIFE dia miantoka fa ao amin'ny maodely A11 dia manana rafitra fanasan-damba sy vacuum tena izy roa-in-iray. Na dia zava-misy tsy maintsy hazavaina aza izany, dia manana tanky tokana ho an'ny rano sy loto izahay, 500ml ho an'ny korontam-bato ary 200 fotsiny (fa ampy) ho an'ny rano. Amin'ity tranga ity, manaitra ny manana rafitra "scrubbing" izay manao fanazaran-tena amin'ny tanana amin'ny fihetsehana kely, izany dia mahatonga azy ho mahomby kokoa ary misoroka ny zavona. Na izany aza, araka ny lazaiko matetika, ireo mops ireo dia natao hanomezana fikasihana ny parquet na ny gorodona hazo, ary mifanaraka tsara amin'ny gorodona seramika izay mamela marika rano marobe.
Tavoahangy loto: 500ml
Tavoahangy mifangaro: 300ml + 200ml
Mahay misasa sy manadio amin'ny fotoana mitovy, hanitsy izany amin'ny alàlan'ny fampiharana finday. Amin'ity, Maimaim-poana ho an'ny Android sy iOS Afaka mampifanaraka ny ILIFE A11 isika ary mampifandray izany amin'ny Alexa, Mpanampy virtoaly an'i Amazona hankatò ny toromarika mazava momba ny asa fanadiovana.
Ho setrin'izany, manana fomba roa amin'ny fampiasana manual isika, amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso azo atao amin'ny programa miaraka amin'ny fitaovana, ary koa ny rafitra fanaraha-maso virtoaly tafiditra ao amin'ny fampiharana. Rehefa avy nandinika ny trano manontolo isika dia afaka:
Manangana rafitra fanadiovana faritra
Manangana rafitra fanadiovana zonal
Manaova fandaharam-potoana fanadiovana
Manaova fanadiovana ny tendrony na «Spot Mode»
Anisan'ireo fiasa mahazatra hafa, toy ny fahafahana manitsy ny hery suction telo.
Na izany aza, tsy manana fampahalalana mazava momba ny decibel izay misy an'io izahay ILIFE A11, na izany aza, dia lavitra ny iray amin'ireo mangina indrindra eny an-tsena. Na izany aza, manana rafitra fanadiovana "mangina" izy io izay mampihena ny heriny, saingy noho ny antony mazava dia mampihena be ny tabataba avoakany.
Este Ny ILIFE A11 dia mitentina 369 euros ho fitsipika ankapobeny, na dia misy tolotra maro aza ao amin'ny AliExpress, na dia misy fandefasana avy any amin'ny faritra misy anao aza, izay hamela anao hankafy izany amin'ny vidiny fanitsiana kokoa. Antony iray hafa tokony hotadidina fa ity ILIFE A11 ity dia safidy iray feno endri-javatra avo lenta amin'ny vidiny izay eo amin'ny antonony. Efa fantatrao fa ny fahaiza-manakosoka amin'ny ankapobeny dia lavitra ny atolotry ny rafitra fanadiovana manual, fa suction, scan 3D ary ny heriny mitsoka dia mahatonga azy ho safidy tena mahaliana.
Navoaka tamin'ny: Diaben'ny 25 tamin'ny 2022
Fanovana farany: Diaben'ny 25 tamin'ny 2022
Miaraka amin'i Alexa ihany
Rafitra fiampangana hafahafa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » ILIFE A11, safidy misy endri-javatra maro sy vidiny tsara [Famerenana]